नेपाली हिरोइन कस्को रुचीको पहिरन कुन ? - Experience Best News from Nepal
नेपाली हिरोइन कस्को रुचीको पहिरन कुन ?
पहिरनको मामिलामा नेपाली अभिनेत्रीहरु पनि निकै सजग बन्न थालेका छन् । जस्ता पायो त्यस्तै ड्रेसमा ठाँटिने परम्परा हटेको छ । आकर्षक विभिन्न पहिरनमा सार्वजनिक स्थानमा देखिने नेपालका चल्तीका ६ अभिनेत्रीहरुलाई कस्तो–कस्तो ड्रेस मन पर्छ ? छोटो रिपोर्ट ।
–साप्ताहिकबाट राम्जी ज्ञवालीको लेख
आङ्गका फाउन्डेशनको सुरुवात, यस्तो छ पहिलो सामाजिक कार्यको सुरुवात
इन्डोनेसियाको बालीमा प्रियंकाको ‘हनिमुल ट्रायल’ !! (फिचर)
इन्स्टामा यसरी पोखियो प्रियंकाको जवानी !! हेर्नुहोस तस्विरहरु
Keki AdhikariPriyanka Karki
हतारिएकी अभिनेत्री श्रद्धा कपुरको नेपाली वर संगको विवाह रोकियो !!! कारण के थियो